Sakafo sy Drink Hevitra ho an'ny Corporate Events - News Fitsipika
Sakafo sy Drink Hevitra ho an'ny Corporate Events
Rehefa ianao orinasa mikarakara ny hetsika tianao ny zavatra rehetra ho nihazakazaka araka izay hampandeha tsara araka izay azo atao. Ny iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja indrindra tokony laharam-pahamehana dia ny sakafo sy ny zava-pisotro amin'ny hetsika toy izany. Ny toetra sy ny dia be ny sakafo sy zava-pisotro ianao, hoy manome be dia be momba ny mpikarakara ity karazana hetsika. Maro ireo mpandray anjara amin'ny karazana zava-nitranga mitaraina momba ny hivoaka ny hetsika noana izay famantarana fa hianao tsy nitondra fikarakarana ny vahiny araka ny tokony ho. Ireo no sakafo sy zava-pisotro hevitra ho an'ny zava-nitranga orinasa.
sakafo atoandro Events
Rehefa manana sakafo antoandro hetsika, mpanatrika samy hafa dia hanana isan-karazany takiana. Na izany aza, manomboka amin'ny alalan'ny fanomezana vahiny sasany mini-tsakitsaky miaraka amin'ny zava-pisotro toy ny dite sy kafe. A Mitana kokoa ny sakafo dia tokony ho namatsy amin'ny andro aoriana. Tokony ho nanaraka ny tsindrin-tsakafo ary farany dite na kafe indray mandeha indray.
Cocktail na Drinks Party
Ity karazana orinasa hetsika dia tsy noho ny hafa ara-karazana hahazoam-Niara. Na izany aza, tokony mbola hanome be dia be ny sakafo sy zava-pisotro hanao fahatsapana lehibe. A nanana lohahevitra mifandraika alina amin'ny sakafo sy zava-pisotro dia mety ho voly kokoa noho ny fanomezana maimaim-poana fotsiny zava-pisotro.
Dia manome ny mpanatrika ny fotoana malalaka mba hanatrika io karazana hetsika. Izy ireo manantena ho afaka mampiasa malalaka fisotroana. Tokony ho hita ao io fisotroana ny zava-pisotro rehetra ireo dia aleon'ny olona misotro. Ny sasany dia tsy te-toaka, ny sasany hikambana amin'ny tsy tapaka ny zava-pisotro, raha ny hafa kosa dia te zavatra hafahafa kokoa toy ny Molotov.
Mpanatrika mety tsy hanantena feno sakafo amin'izao karazana hetsika. Na izany aza, tokony hanome be dia be ny tsakitsaky mba hifanaraka mpanatrika rehetra ny zavatra takiana. Tsarovy, ny olona sasany manana allergie na tsy fahazakana na tsy mihinana sakafo sasany. Tokony ho nentina tany tantara sy ny hafa fihinanana safidy dia tokony ho azo ho an'ireo izay nanatrika ny hetsika.
Fihaonambe hitondra fotoana bebe kokoa noho ny hafa karazana orinasa fisehoan-javatra. Midika izany mpanatrika mitaky sakafo sy zava-pisotro bebe kokoa mandritra ny tontolo andro.
Ireo zava-nitranga tokony manomboka maraina. Matetika, mpanatrika dia lavitra sy hijanona indray alina tao amin'ny foiben'ny fikambanana hetsika toy ilay ao amin'ny www.chateaupolonez.com. Raha izany no mitranga sy ny mpanatrika dia mitoetra ao amin'ny orinasa hetsika foibe any Houston, dia tokony ho azo antoka izy ireo manomboka ny andro amin'ny feno sakafo maraina. Zava-pisotro sy tsakitsaky tokony homena mandritra ny tontolo andro.
amin'ny sakafo antoandro, kokoa feno sakafo takiana. Izany no tokony ahitana fara fahakeliny telo andalana. Rehefa mandroso ny andro, fiatoana fohy dia tokony horaisina mba mpanatrika afaka manana zava-pisotro ary ny sasany tsakitsaky. Izany angamba fahendrena tsy mba hampiditra misy toaka an-fizotry ny raharaham-barotra mandra lafiny-javatra dia efa vita.
Raha vao vita ny fihaonambe, fanatitra zava-pisotro maimaim-poana ny sasany dia mety ho fomba mahomby mba hifandray bebe kokoa amin'ny mpanatrika. Mety ho tsara kokoa ny zava-nitranga raha mitranga ny maro andro.
Tsy ny rehetra fisehoan-javatra orinasa dia mitovy. Izany dia midika hoe tsy maintsy hanome ny sahaza habetsahan'ny avo-tsara ny sakafo sy zava-pisotro ho an'ny mpanatrika. Izany tandavan hatramin'ny andro feno fisehoan-javatra ho fohy zava-nitranga izay sy ny zava-pisotro tsy sakafo no ilaina. Ny hevitra ambony dia hanampy anao hanao fanapahan-kevitra tsara kokoa momba ny zavatra sakafo sy zava-pisotro mba hanome amin'ny manaraka orinasa hetsika.
← New zava-mahadomelina mihevitra kivy Tsy ampy 24 ora ! [VIDEO] Ve rongony tena hampidina ny IQ? →